War Deg Deg Ah:-Toogasho Goordhaweyd Ka Dhacday Magaaladda Muqdisho – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
War Deg Deg Ah:-Toogasho Goordhaweyd Ka Dhacday Magaaladda Muqdisho
Wararka aynu ka heleyno mid kamid ah degmooyinka gobalka banaadir ayaa ku waramaya in sarkaal katirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya lagu dilay guda magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa goordhaweyd waxaa ay rasaas kala dhaceen kheybaha sare ee jirkiisa mid kamid ahaa saraakiisha militariga dowladda soomaaliya oo la sheegay inuu katirsanaa saraakiisha tarjumaana u ahaa ciidamada cadaanka ee tababarada siiya ciidamada xooga soomaaliya ee lagu tababaro Warshadii Nac naca oo hada ah Xero ay degan yihiin Ciidanka Milatariga Soomaaliya.
Goobjooge ka ag dhawaa halka uu dilka ka dhacay ayaa Simba u sheegay in dabley gaaraya ilaa laba ruux ay maanta dil u geysteen sarkaal katirsanaa ciidama Militariga soomaaliya oo kamid ahaa saraakiisha joogta warshadii nac naca oo ciidamo cadaan ah tababaro ku siiyaan ciidamo katirsan xooga soomaaliya.
War Rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al-shabaab ayaa lagu sheegay iney ciidamo gaar ah oo shabaab katirsan ay muqdisho ku dileen oo kamid ahaa tababarayaasha ciidamada melleteriga dowladda soomaaliya, oo ay magaciisa ku sheegeen Max’med Tima Jilac laguna dilay gudaha degmada wadajir.
Dhanka kale xiriiro kala duwan oo ay Idaacada Simba ay la sameysay saraakiisha ciidamada Militariga dowladda soomaaliya ee ku sugan muqdisho ayaa ka gaabsaday iney ka hadlaan dilka loo geystay sarkaalkaan magaciisa lagu sheegay maxamed oo lagu dilay maanta xaafada kaawo godey ee wadajir.
Wararkii ugu danbeeyay ee ku aadan dilkaasi ayaa ku waramaya in aaga lagu tooktay sarkaalka ay gaareen ciidamo katirsan dowladda soomaaliya oo isla markii goobta ka qaaday meydka sarkaalkaasi.
Waxii kusoo kordha Waan Idinla Soo Wadaagi Doonaa…. WWW.SimbaNews.com